Iikhawuntara ezithengiswayo eLeicester, Leicestershire
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Amakhaya okuhlala Izindlu zekhaya I-Leicestershire Leicester
I-1-10 yoluhlu lwe-22
I-2 Igumbi lokulala liThengiswa eLeicester, Leicestershire
Akukho khonkco. Indawo emnandi eyandisiweyo kunye nehlaziyiweyo yaphela yindawo ye-cottage yothando kunye nomlingiswa. Ifunwe emva nendawo efanelekileyo yokuhambahamba phakathi kumgama wokuhamba weziko, kubandakanya iivenkile, iposi, isikolo esincinci, ithala leencwadi, indlu kawonkewonke kunye nokufikelela ngokufanelekileyo kwikhonkco ...
Leicester in Leicestershire, Le9 4fg
I-3 Igumbi lokulala liThengiswa eLeicester, Leicestershire
Isishwankathelo lithuba elihle lokuthenga ityhubhu emangazayo enqabileyo egcwele zozibini kunye nomtsalane. Indawo yokuhlala iquka iholo, amagumbi amathathu okwamkela, ikhitshi ehlaziyiweyo, igumbi lokufundela, igumbi elingaphantsi komgangatho WC, indawo yokugcina izinto, amagumbi okulala amathathu kunye negumbi lokuhlambela.
Leicester in Leicestershire, Le8 9gg
Impahla entle esembindini yeyona ndawo intle ibekwe ngaphakathi kwilali yasemaphandleni encinci ekufutshane nendawo yokuthenga kunye neendawo zokuzonwabisa kwi-oadby, evington kunye nase-glen enkulu njengendawo yokudibanisa iindlela zendlela i-A6 kunye ne-A47: Ipropathi yandisiwe kwaye iyindawo entle enekhaya emaphandleni vi ...
Leicester in Leicestershire, Le2 2ft
. Ukuba yipropathi edweliswe kwiBanga lesi-1830, kwiLodge yaseNyakatho ...
Leicester in Leicestershire, Le9 7qj
umbono Izindlu zekhaya ishicilelwe kwiiveki 4 ezidlulileyo
Uyolo, ulwandiso, uphuculwe kakhulu, ulwakhiwo lwexesha lesakhiwo esihle somzi kunye nomlinganiso. Ifunelwe indawo ekhuselekileyo yokugcina indawo, kumgama wokuhamba iziko, kubandakanya iivenkile, isikolo esincinci, ugqirha utyando, izindlu zikarhulumente, ilizwe elivulekileyo ...
Leicester in Leicestershire, Le9 9nl
Ukujonga ngokungqongqo ngokuqeshwa kuphela.Lo khonkco lihle liqhotyoshelweyo lihlala kwilali efunwayo yaseRearby. Ukunikeza ngamagumbi amabini okwamkela, ikhitshi / idinala kunye namagumbi amathathu okulala; Indawo yokuhlala ibekwe kakuhle kwaye igcinwe ngothando. Ngasemva ndiya ...
* Uncedo lokuthenga olufumanekayo * Iipasile ze-Bespoke ezisixhenxe * zibekwe entliziyweni ye-Countesthorpe * Ukucaciswa okuPhezulu * Ukuphila kwesi Sikolo * Ubomi basezilalini * Ukujonga kakhulu okucetyisiweyo ** Ukufowuna ukulungiselela umhla weVeki yethu elandelayo kwi-18/19 kaJanuwari 2020 * Buckingham Mews Uphuhliso lwe-bespoke ...
IsishwankatheloLoluhlobo oluhle lwasekhaya lwepropathi yegumbi lokulala luza kwenza ukuthengwa kwexesha lokuqala. Ipropathi igcinwe kakuhle ngabanini bamanje kunye nendawo yokutyela esekhitshini le ndawo yeyokwenyani ayinakuphoswa.IncwadiCountesthorpe ilali enkulu kunye neparish yeli ...
Indawo yokulala enamagumbi amabini okulala kunye neKhitshi isidlo sangokuhlwa kwindawo ekufunwa kuyo emva kokuba ilali yaseThurnbyHortons iyonwabile ukuzisa intengiso yegumbi lokulala ezimbini ezihlaziyiweyo, embindini wedolophu elungiselelwe ukuba yiThurnby. Indawo yokuhlala inendawo yokuphumla, igumbi lokutyela lekhitshini, phantsi komgangatho ewe ...
Leicester in Leicestershire, Le7 9pj
I-Leicester ((mamela) I-LEST-ər) yindawo yedolophu kunye negunya elinobumbano kwi-Mid Mid yase-England, kunye nedolophu ye-Leicestershire. Isixeko simi kwi-River Soar kwaye kufutshane nasekupheleni kwempuma yeHlathi leSizwe. I2016 yonyaka uqikelelo lwabemi beSixeko saseLeicester ugunyaziwe wobumbano yi-348,300, ukunyuka malunga ne18,500 (5.6%) ukusuka kubalo lobalo lwe2011 ye329,839, eyenza ukuba ibe ngoyena maninzi baninzi kumasipala wase-Mid Mid East. Indawo edibeneyo yedolophu ikwindawo ye-11th ebabaninzi e-England kunye ne-13th inabantu abaninzi e-United Kingdom.Leicester ikwindlela yokuhamba yendlela ezimbini ezinkulu zikaloliwe-emantla / emazantsi Midland Main Line kunye nempuma / nentshona Birmingham ukuya eLondon Stansted CrossCountry umgca; kunye nokudibana kweendlela zeM1 / M69 kunye neendlela ze-A6 / A46. ILeicester likhaya leklabhu yebhola yeLeicester City kunye neqela lebhola yombhoxo iLeicester Tigers.